Tag: mpanjifa | Martech Zone
Talata, Janoary 21, 2014 Kelsey Cox
Alohan'ny hametrahanao ny vato ny teti-bolanao amin'ny marketing amin'ity taona ity, alao antoka fa hijerena ny zavatra azontsika ianarana tamin'ity taona lasa ity ianao. Ny fahalalana ny angon-drakitra tsotra vitsivitsy tamin'ny vanim-potoanan'ny fiantsenana 2013 dia mety hanampy amin'ny fampahalalana ny fomba fifandraisanao sy ny varotrao amin'ny mpanjifa. Mba hahitana izay nanampy sy nandratra ny traikefa fiantsenan'ny mpanjifa nandritra ny fetin'ny fialantsasatra 2013, nandinika mpiantsena 1,000 i Baynote ary nanangona ny angon-drakitra tao amin'ny infographic etsy ambany. Rehefa tonga
Ahoana no handanianay ny atiny amin'ny marika
Alatsinainy, Novambra 12, 2012 Sabotsy 10 Novambra 2012 Jenn Lisak Golding
Niara-niasa tamin'ny mpanohana ny famoahana katalaogy nomerika izahay, Zmags, mba hamoronana an'ity sary mahafinaritra sy mahatalanjona ity amin'ny fomba laninay ny atiny amin'ny marika amin'ny maha mpanjifa anay. Ny fikarohana sasany dia efa nanamafy izay fantatro, fa ny sasany kosa nahagaga. Na izany aza, ny hafatra ankapobeny dia ny fampidiran-kevitrao tsy maintsy mifanaraka amin'ny fitaovana maro. Ahoana no anaovanao an'izany? Volavola fanta-daza sy fampiasa iraisana amin'ny fitaovana rehetra. Ny fampiasana sary sy haino aman-jery manankarena koa dia mitazona ny faharetan'ny sain'ny olona. Manana a
Tsy mahita na inona na inona? Kitiho hatrany amin'ny paositra…